दलान नेपाल : May 2015
गच्छदार द्धारा अन्य मधेशी पार्टीहरुका सभासद संग गोप्य छलफल
राष्टिय सरकार प्रति महन्थ ठाकुर पनि साकारात्मक
नयां सरकार निर्माणको वकालत गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले अन्य मधेशी पार्टीहरुका सभासदहरु संग गोप्य रुपमा छलफलहरु अघि वढाएको उनी निकटस्त स्रोतहरुले बताएका छन । गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक समेत सहभागी रहेको मधेशी मोर्चाका कयौन घटकहरुले तत्कालै सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताईरहदा गच्छदारले ती पार्टीहरु सम्बद्ध सभासदहरु संग गरीरहेको छलफलहरुलाई महत्वपुर्ण रुपमा लिईएको छ । खासगरी मधेशी मोर्चामा सामेल केही प्रमुख मधेशी पार्टीहरु सरकारमा सहभागीको विषयमा साकारात्मक नदेखिए पछि गच्छदारले रणनितीक रुपमा ती पार्टी सम्बद्ध सभासदहरुसंग छलफल अघि वढाएको बुझिएको छ । यस अघि पनि गएको ८ माघको सेरोफोरोमा सर्वपक्षिय सरकारको चर्चा चल्दा गच्छदारले सानेपा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा सबै मधेशी पार्टीहरुका सभासदहरुसंग छुटै छलफल गरेका थिए । हिजो शनिवार र गएको शुक्रवार मात्रै फेरी गच्छदारले अन्य मधेशी पार्टीहरु सम्बद्ध सभासदहरु संग छलफल गरेको उनी निकटस्त स्रोतले जनाएका छन ।
अब नयां मोर्चाबन्दी हुन्छ - मधेशी नेतृत्वहरु
३० दलीय गठवन्धनमा समेत रहेका कतिपय मधेशी पार्टीहरुले अब उक्त मोर्चाबन्दीको समाप्त भईसकेको बताउछन ।
३० दलीय गठवन्धन तथा छुटै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा समेत आबद्ध मधेशी पार्टीहरुका केही अध्यक्षहरुले अब नयां ध्रवीकरणको आधारमा छुटै मोर्चाबन्दी हुने बताएका छन । ३० दलीय गठवन्धनमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चामा विजय गच्छदारले नयां सरकारको कुरालाई अघि वढाउन थालेपछि मधेशी पार्टीहरुमा ठुलो असन्तुष्टि देखिएको छ । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोका अनुसार एमाओवादीले सरकारमा जाने निर्णय गरे संगै ३० दलीय गठवन्धनको अस्तिव्व नै समाप्त भईसकेको छ । महतो भन्छन, हामी पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविद्यानको लागी मोर्चाबन्दी गरेका थियौ, सरकारका लागी होईन । महतोले मधेशी मोर्चामा प्रतिनिधित्व गर्ने विजय गच्छदार समेत विगतको सहमतीवाट टाढा गएर सरकारको खेलमा लागेको भन्दै मधेशी पार्टीहरु विच पनि नयां शिराले मोर्चाबन्दीको कुराकानी अघि वढेको बताए । महतोले भने, म र उपेन्द्रजी विच एक खालको सहमती छ, हामी कुनै पनि शर्तमा संघियता सहितको संविद्यान जारी नहुन्जेल सरकारमा जान्नौ ।
गच्छदारका कारण मधेशी मोर्चाको बैठक फेरी अन्योलमा
१४ बैशाखमा बसेको मधेशी मोर्चाको बैठक । जुन बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार पनि सहभागी थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको कारण फेरी एक चोटी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा राष्टिय सरकारको वकालत गर्दै आएका गच्छदार र अन्य मधेशी नेतृत्वहरु विच दुरी वढदै जादा यस्तो वातावरण बन्न गएको देखिन्छ । यस अघि पनि गच्छदार र अरु मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु विच आन्तरिक खटपट हुन थाले पछि बैठकहरु प्रभावित हुदै आएको थियो ।
तर १२ बैशाखमा भुकम्प आए पछि अनायास १४ बैशाखमा मोर्चाको बैठक बस्यो । हाल मार्चाको नेतृत्व गरीरहेका सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महताको अगुवाईमा भएको उक्त बैठकमा गच्छदार समेत सहभागी थिए । उक्त बैठकमा भुकम्प पिडितहरुका लागी मधेशका जिल्लाहरुमा खाद्यन्न सकंलन गर्ने उदेश्यले मुठि दान अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेशी पार्टीहरुको उक्त प्रयासलाई चौतर्फी साकारात्मक रुपमा लिईएको थियो । तर उक्त अभियान अन्र्तगत मधेशका जिल्लाहरुमा संकलन गरिएको खाद्यन्नलाई समेत व्यवस्थि रुपमा पिडितहरु माझ पुर्याउन नपाउदै मोर्चा भित्र किचलो सुरु भएकाले अर्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।
सिंगटीमा पुनर्जन्म पाएँका बिबिचन महतोको व्यथा
at 5:47 AM Posted by Dalan
महाभूकम्पपछि गत २९ गते मंगलबार आएको अर्को शक्तिशाली भूकम्पमा परी दोलखामा मृत्यु हुनेको संख्या ८३ पुगेको छ। पहिरोमा पुरिएकाको अझै उद्धार हुन सकेको छैन। सिंगटी बसपार्कको पाँच तल्ले पक्की घरमा पुरिएका व्यक्तिलाई निकाल्न सकिएको छैन। भूकम्पको धक्काले सिंगटीकै बासिन्दा भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट घर भत्किएपछि किनमेल गर्न आएका, सरकारी राहत लिएर फर्कंदै गरेका र सदरमुकाम चरिकोट फर्कन बसको पर्खाइमा बसेका सर्वसाधारण धेरै पुरिए। पुरिएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय प्रहरी र सेनालाई चाँडो उद्धार गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। सेनासँग पर्याप्त जनशक्ति छ तर निकाल्ने साधन र डोजर छैन। भूकम्पको धक्काले ढुंगामाटोले बनाइएको घर सबै भत्कियो। मंगलबार मध्याह्न भूकम्प गएपछि बिबिचन महतो पनि पुरिए। पुरिएपछि उनीहरूलाई कसरी जीवितै निकाल्न सकियो उनकै शब्दमा -
कोट्याएर निस्किएँ - बिबिचन महतो
जन्मथलो रौतहट छाडेर १४ वर्षदेखि सिंगटीमा व्यापार गर्दै आइरहेको थिएँ। भाडामा बस्नुभन्दा आफ्नै घर हुँदा बेस भनेर जुन घरमा पसल गर्थें, त्यही घर किनें। लगानी बढाएँ। पहिलो र दोस्रो भूकम्प जाँदा चर्किए पनि सामान निकालेको थिइनँ। बजार पसल अरू बेला जस्तै सबै खुल्न थालेपछि मैले पनि खोलें। भूकम्प जाँदा ग्राहक थिए। पैसा फिर्ता दिन खोज्दै थिएँ। भूकम्प गयो। ती ग्राहक भाग्न भ्याए। मचाहिँ पैसा दिन खोज्दा अलमलिएँ। मेरो पसलका काम दार सिजभ महतोचाहिँ ढोकामा च्यापिएछन्। घर अगाडि सडकतिर भत्किएपछि म भित्रै बिममा अडेस लगाएर बसें। माथिल्लो तल्लाले थिच्दासम्म केही भएको थिएन। जब सँगैको मिङमार शेर्पाको घर मेरै घरतिर ढलेपछि अब मरियो भन्ने लाग्यो।
at 7:24 AM Posted by Dalan
१४ बैशाखमा बसेको मधेशी मोर्चाको बैठक ।
सदनमा सहमतीय राष्टिय सरकारको प्रस्ताव पेश गर्नु अघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ३० दलीय गठवन्धनमा सहभागी मधेशी पार्टीहरुलाई छलफलका लागी डाकेका थिए । छलफलको क्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजग गच्छदार वाहेक अरु सवैले अस्विकार गरेका थिए र प्रचण्डलाई त्यस्तो नगर्न सुझाए । तर त्यस्तो भएन, प्रचण्ड र बाबुराम भटराईले सदनमा राष्टिय सरकारको माग गरे । पछि एमाओवादी पार्टीले औपचारिक रुपमै निर्णय गर्दै नेतृत्वको समेत दाबी अघि सारेका छन । प्रचण्डलाई यो काम मधेशी पार्टीहरुको तर्फवाट गच्छदार वाहेक अहिले सम्म कसैको धाप छैन । त्यसो भए मधेशी मोर्चामा रहेका अन्य घटकहरुले के गर्लान ?
चैतमा ३० दलीय गठवन्धनले आव्हान गरेको आन्द्योलन विचमै फिर्ता लिए पछि फोरम नेपाल, सदभावना पार्टी सहितका मधेशी पार्टीहरुले प्रचण्डले बोलाएको बैठक नै वहिष्कार गरेका थिए । पछि कति प्रयास पश्चात ३० दलीय मोर्चाको बैठक बस्यो, जसमा वार्तामा सहभागी हुन समेत कार्यदल गठन गर्ने कुरा थियो । तर त्यही विचमा भुकम्प आयो र १४ बैशाखमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकले विगतको सवैको कुरालाई थाती राख्दै भुकम्प पिडितहरुका लागी सहयोगमा जुटने निर्णय गर्यो । आश्चर्य त के छ भने, त्यही बैठकवाट फर्के पछि मधेशी मोर्चाको पनि तत्कालै बैठक बस्यो र राहतका लागी छुटै अभियान चलाउने निर्णय गर्यो । आन्तरिक किचलोका कारण गएको लामो समय देखि बस्न नसकेको मोर्चाको उक्त बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजय गच्छदार समेत उपस्थिती भए । मोर्चाको उक्त बैठकले भुकम्प पिडितहरुका लागी मधेशमा मुठि दान र रक्त दान अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्यो । र उक्त कार्यलाई व्यवस्थीत गर्न मोर्चामा सहभागी मधेशी पार्टीहरुको एउटा कार्यदल समेतको निर्माण गर्यो ।
महाभुकम्प पछिको सम्भावित राजनितीक त्रासदी
at 6:00 AM Posted by Dalan
१२ बैशाखमा आएको महाभुकम्प पश्चात अहिले सम्म आईरहेको पराकम्पनले हामी अहिले त्रसित नै छौ । सम्भवतह अझै केही साता हामी यस्तै वातावणमा रहने छौ । विस्तारै समान्यीकरण हुने त निश्चित नै छ । महाभुकम्पको वेला उद्धार र राहतमा देखिएको उदासिनताले एमाओवादी भन्दा पनि एमालेजनहरुलाई नयां कथित राष्टिय सरकारको वारेमा बोल्ने मौका जुडाई दिएको छ । १२ बैशाख भन्दा अगाडीको राजनितीक कोर्सलाई यही वाहानामा सिध्याउने सवै भन्दा उपयुक्त माध्यमको रुपमा अहिले चर्चामा आएको राष्टिय सरकार बन्ने भएकाले यसमा काग्रेसीहरु पनि हासी हासी राजी हुने लगभग निश्चित छ । एमाओवादीका लागी पनि उपयुक्त सेफल्याडीग गर्ने मौका मिल्ने छ । जसरी पनि सरकारमा सहभागी हुनु पर्ने मान्यता राख्ने विजय गच्छदार हौसिनु कुनै चमत्कार छैन । अन्य मधेशी नेतृत्वहरु अहिले यती कमजोर छन कि त्यसलाई उनीहरुले अस्विकार गर्ने आटै गर्दैन । अहिले सम्म मधेशी मोर्चामा सहभागी गच्छदार वाहेक सवै मौन छन । तर दोस्रो तहका प्राय मधेशी नेताहरु यसको पक्षमा छैन । तर नेतृत्वले लिने निर्णय विरुद्ध विद्रोह गर्ने आट पनि यी मधेशी पुस्तामा छैन । त्यसैले मधेशी मोर्चा कथित अहिले कहलिएको रष्टिय सरकारमा सहभागी नहोला भन्न सकिन्न ।
सभासद अभिषेक प्रताप शाह द्धारा १ बर्षको तलव भुकम्प पिडितलाई दिने घोषणा
at 12:56 AM Posted by Dalan
हालै गोरखा जिल्लामा भुकम्प पिडितहरुलाई राहत वितरण गर्दै भारतीय संसाद जगदम्बिका पाल संग सभासद अभिषेक प्रताप शाह
संविद्यानसभाको कपिलवस्तू क्षेत्र नम्बर ५ वाट प्रत्यक्ष तर्फका सभासद अभिषेक प्रताप शाहले हालै गएको भुकम्प वाट पिडितहरुका लागी आफनो १ बर्षको तलब प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन । शाहले आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, संविद्यानसभाले एक महिनाको तलव भुकम्प पिडितहरुका लैजाने घोषणा गरेको वाहेक म आफनो १ बर्षको तलब भुकम्प पिडितहरुका लागी प्रदान गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको छु । शाह मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्छन ।
१२ बैशाखमा आएको महभुकम्प पश्चात काठमाडौ सहितका केही पहाडका जिल्लाहरुमा व्यापक धनजनको क्षती भएको छ भने ८ हजार भन्दा वढीको ज्यान गईसकेको छ । शाहले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई विना भेदवाव राहत वितरण समेत गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, म हालै प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत लिएर जादा वितरण वारेमा व्यापक गुनासाहरु सुन्नमा आए, जुन यस्तो अवस्था लाजमर्दो कुरा छ ।
पढनुस प्रेस विज्ञप्तिको पुरा अंश
महाभुकम्पवाट तराई मधेशमा कति भयो क्षती ?
at 5:08 AM Posted by Dalan
अहिले सम्म २९ जनाको मृत्यू, ३३४ जना धाईते र १ हजार भन्दा वढी घरहरु क्षती भएको देखिन्छ ।
तराइ मधेशमा समेत राम्ररी महसुस गरिएको भुकम्प पश्चात २९ बैशाख मंगलवार दिउसो जनकपुर स्थित अंचल अस्पतालमा विरामीहरुका लागी बनाउन लागीएको टेन्ट...फोटो/जनकपुर टुडे
गएको १२ बैशाखमा आएको महाभुकम्पका कारण मृतहरुको संख्या देशैभरीमा ८ हजार नाघी सकेको छ भने धाईतेहरु २० हजारको हराहरीमा पुगेको देखिन्छ । आम नागरिकहरुको अढाई लाख भन्दा वढी घरहरु क्षतीग्रस्त भएको छ भने सरकारी कार्यलयहरु पनि व्यापक रुपमा क्षती ग्रस्त भएको तथ्यांकहरु आईरहेको देखिन्छन । गृहमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार तराइृमधेशका जिल्लहरुमा अहिले सम्म २९ जनाको मृत्यू भएको छ भने ३३४ जना धाईते भएका छन । १०४७ ओटा आम नागरिकहरुको घरहरु भत्कीएका छन, १६८ ओटा सरकारी कार्यलय पनि क्षती ग्रस्त भएको छ ।
१२ बैशाखको भुकमपको समान्य प्रभाव तराई मधेश तिर भए पनि हिजो मंगलवार आएको अर्को शक्तिशाली झटकाको प्रभाव मधेशका जिल्लाहरुमा पनि राम्रै महसुस भएको थियो । अहिले सम्मको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सुनसरीमा ८, बारामा ५, पर्सामा ५, रौतहटमा ३, मोरडमा २, धनुषमा २, सर्लाहीमा २, महोतरीमा १ र नवलपरासीमा १ जनाको मृत्यू भुकम्पको कारण भईसकेको छ ।
“विद्यालय खुल्दै छ भनेर व्यापक हल्लाखल्ला गर्नु पर्यो”
१२ बैशाखमा भुकम्प गए पश्चात महेन्द्र ज्योती माध्यमिक विद्यालय गोरखाका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण बाबु आचार्य ४० ओटा गाविसहरुमा धुमफिर गरीसकेका छन । गोरखा जिल्लामा रहेको ४९५ विद्यालय मध्ये ४४३ ओटा क्षतीग्रस्त भएको तथ्यांक जिल्ला शिक्षा कार्यलय गोरखाले सार्वजनिक गरीसकेको छ । आचार्य ४० ओटा गोरखाका गाउहरु धुम्दा के-के देखे ? आईतवार विहान उनीसंग गरिएको कुराकानी......
गोरखा - १, स्थिती महेन्द्र् ज्योती उच्च माध्यमिक विद्याँलयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण बाबु आचार्य
भुकम्प गए पश्चात तपाई याहाका ४० ओटा गाविसहरु धुमिसक्दा, के रैछ याहाको अवस्था अली बताई दिनुस ?
- हामी गोराखाका ४० ओटा गाउ धुमिरहदा समान प्रकृतिका समस्याहरु देख्यौ । मानिसहरु घरहरु भत्कीएका छन । उनीहरु घर भित्र पस्न सकिरहेका छैनन । ४० प्रतिशत घरहरु पुर्ण रुपमा ध्वस्त नै भएका छन र वाकी घरहरु पनि चर्किएका छन । मानिसहरु त्याहा पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन । सुरुका तीन चार दिन त मानिसहरु खुल्ला आकाश मुनि सामुहिक रुपमा बसे र अहिले विस्तारै उनीहरु त्रिपाल पाउदै जादा अली त्यसलाई व्यवस्थती गरेर बस्न थालेको छ । कच्ची घरहरु एउटा पनि बस्न योग्य छैन । मानिसहरुमा ठुलो डरत्रासहरु देखिन्छन । अहिले पनि धक्काहरु महसुस भईरहदा उनीहरु घर भित्र पस्न सकिरहेको छैन । करिव १५ दिन जती अब धक्का पनि आईरहेको छैन भन्ने महसुस भयो भने १५ प्रतिशत जती मानिसहरु आफनो घर फर्कन सक्ने वातावरण चाही मिल्छ ।
मानिसहरु घर भित्र फस्न समेत सकिनरहेको अवस्थामा र उनीहरु त्रिपाल मुनिको जीवन विताईरदा उनीहरु कस्तो मनोविज्ञानमा बाचीरहेको तपाईले पाउनु भयो ?
- सबै भन्दा ठुलो प्रश्न नै त्यही हो । मानिसहरु मानसिक रुपमा विक्षिप्त देखिन्छन । यदी उहाहरुलाई मनोवैज्ञानि परामर्श गरिएनन भने, नेपाली समाजले ठुलो क्षती व्योहार्नु पर्ने हुन्छ । खासगरी वालवालीका र वृद्धवृद्धाहरुमा सबै भन्दा वढी समस्याहरु देखिएका छन । युवाहरु त गाउमा खासै थिएन । वरु अहिले युवाहरु सबै ठाउवाट गाउ गाउमा आएको देखिन्छ । त्यसले केही सहज वातावरण बन्छ कि भन्ने आश छ । युवाहरु अहिले जाहा ताहा वाट आएर आआफना वृद्ध आमा बुबाहरु संग संग बसीरुहेको देखिन्छ । म पनि आफनो गाउमा दुई रात आमा बुबा संग विताए । मलाई लाग्छ अब उद्धार र राहत संगै संगै मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि सुरु गर्नु पर्छ । बच्चाहरु स्कुलमा गएर पढन तयार छैन । वृद्धवृद्धाहरु गाउमा बस्न तयार छैन ।
बारपाकमा एक गेडो चामल पुगेको छैन - सुदिप पाठक
महाभुकम्पको केन्द्र बिन्दू बारपाक
गोरखाको दरौदी दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार
गोरखा - राष्टिय मानव अधिकार आयोयका सदस्य सुदिप पाठकले महाभुकम्पको केन्द्रविन्दू रहेको गोरखा जिल्लाको बारपाकमा अहिले सम्म एक गेडो चामल नपुगेको दाबी गरेका छन । हिजो शुक्रवार बारपाकको स्थलगत अध्यन गरेर फर्के पछि पाठकले गोरखामा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो बताएको गोरखावाट प्रकाशित हुने स्थानिय अखवारले जनाएको छ ।
शुक्रवार पाठकले बारपाकको अध्यन पश्चात गरेको पत्रकार सम्मेलनको एक पृष्ठ लामो सार छापेका गोरखाका दरौदी भन्ने दैनिक पत्रिकाले जनाए अनुसार बारपाकमा अहिले सम्म उद्धारको काम समेत सहि ढंगले सुचारु हुन सकेको छैन । १२ बैशाखको महाभुकम्पको दिन त बारपाक कोई पुगेकै थिईन, पाठकले भनेका छन, त्यहैका दुई जनाले गाउलेहरुलाई मलहम पटी लगाउने काम गरेको पाईयो । केरानी घले र उनका दाजूले स्थानिय धाईतेहरुलाई मलहम पटी लगाई दिएका थिए । १४ सय घरधुरी पुर्ण रुपमा नष्ट भएको छ । पाठकका अनुसार शुक्रवार सम्ममा बारपाकमा ४९ पटक हेलीक्पटर पुगेका छन तर एक पटक पनि चामल बोकेर गएका छ्रैन ।
सिन्धुपाल्चौकको सदरमुकाम चौताराको भुकम्पीय व्यथा
गुगल अर्थम्यापमा भुकम्प अघिको चौताराको दृश्य
चौताराको पुरानो बस्ती पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएको दृश्य
चौतारा (सिन्धुपाल्चौक) - १२ बैशाखमा आफना केही कामका लागी निस्केका ६२ बर्षीय निम प्रसाद ढुंगानाका लागी त्यो दिन जिन्दगीकै सर्वाद्यीक पिडामय हुन पुग्यो । चौतारा नगरपालिकै ४ नम्बर वडामा पर्ने भालुवानका ढुंगानाले त्यो दिन व्योहारोको त्रासदीलाई भन्नमा पनि डराउछन । उनी भन्छन, हेर्दा हेर्दै मेरो आखा अगाडी यो चौतारा बजार चकनाचुर हुन पुग्यो । उनी त्यो दिन विहानै खाना खाएर १० बजे तिर समान किन्नका लागी चौतारा बजारमा छिरेका थिए । बजार आए पछि यसो चिनजानको मान्छेहरु संग कुराकानी गर्र्नै पर्यो, उनी भन्छन, चौताराको पुरानो बजारवाट नयां बजार तिर समान किन्नकै लागी अगाडी वढेका थियौ, त्यतीकै वुढो शरीर लतपत भयो, म आफुलाई सम्हालेर भाग्न खोजे र भागे पनि तर मेरै अगाडी पांच मिनेट यो पुरै बजार ध्वस्त हुन पुग्यो र दर्जनौ मान्छे त्यसमा पुरिए ।
मुठि दान अभियान अन्र्तगत ८ हजार क्विनटल चामल उठाईने
हरेक पिडित परिवारलाई एक बोरा चामल प्रदान गरिने तयारी
महाभुकम्पमा प्रभावित भएका पहाडका जिल्लाहरुमा राहत वितरण गर्ने उदेश्यले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सुरु गरेको मुठि दान अभियान अन्र्तगत ८ हजार क्विनटल चामल उठाउन लागीएको मोर्चाले जनाएको छ । १२ बैशाखमा गएको महाभुकम्प वाट काठमाडौ सहित पहाडका जिल्लाहरुमा व्यापक जनधनको क्षती भए पछि मोर्चाको आपतकालीन रुपमा बसेको १४ बैशाखको बैठकले मधेशमा मुठि दान अभियान चलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय अनुसार पछिल्ला दिनमा तीव्र रुपमा मधेशका गाउगाउमा राहत संकलन कार्यक्रमहरु भईरहेको छ । यद्यपी मधेशका जिल्लाहरुवाट अन्य समाजिक संघसंस्थाहरुले समेत विभिन्न पहलमा राहत वितरण गरिरहेको देखिन्छ ।
राहत वितरणमा मधेशी नेतृत्वहरु खटिदै
१२ बैशाखमा आएको महाभुकम्पवाट काठमाडौ सहितका केही पहाडी जिल्लाहरुमा भएको भयावह क्षतीमा राहत पुगोस भन्ने उदेश्यका साथ मधेशी पार्टीहरुका नेतृत्वहरु आफै लागी परेको छ । मधेशी मोर्चाको तर्फ वाट संयुक्त रुपमा मुठि दान र रगत संकलन गर्ने अभियान चलाईरहेका मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुले पार्टीगत रुपमा समेत राहत साम्रग्रीहरु प्रभावित क्षेत्रमा पठाईरहेका छन । उपेन्द्र यादवको संयोजनमा फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सदभावना पार्टीका विभिन्न भातृ संगठनहरु तथा नेताहरुले राहत साम्रगी वितरण गरीरहेको छ ।